QEYL DHAAN IYO BAYAAN PL MA BADBAADINEYSO.
Posted to the Web January 18, 2002
Qofkii caqli leh wuxuu garan karay in dagaal uu ka dhici doono PL markii talladii Issimada tirada badan ay diideen Issimadii tirada yareyd ee haddana ka qayb galay shirkii Carte ee Puntland horay u diiday. Intaasna waxaa ka sii darneyd iyadoo la adeegsaday Isimadii uu magacaabay Siyad Bare si dadka loo kala qeybiyo oo aadba isleedahay hawshii Siyaad ayey isagoo qabriga ku jira sii wadaan sida nin horay uga xoogsan jiray Imaaraadka oo la yiraahdo Garaase oo hadda dhibkiisii kula soo noqday Garoowe.
Waxaana husid mudan in odayaashii PL ay hawshoodii gabeyn maxaa yeelay mar tallo faraha ka baxday ayey Qeylo Dhaan iyo Bayaan wakhtigoodii laga tagey ayey Isha wararka ee Carte ee Somalitalk ku soo shaaciyeen.
Waxaana isweydiiyey maxey odayaasho talladoodu u bixin waayeen xilliyadii la soo dhaafay oo wax qabashadu sahlaneyd oo kala ahaa :-
1- Wakhtigii labada sarkaal uu dilay wiil Xamar laga soo diray oo doolar badan watay kana tirsanaa illaaliyaasha King Kong.
2- Wakhtigii Daneystayaasha tirada yar ay diideen talladii Issimada tirada badneyd oo waliba ciidanka PL ee uu si bareer ah u taageeray.
3- Wakhtigii la dilay Sheehk Dahir Yusuf lana ogyahay yahay kuwii dilay oo labo cali ayan isweeydiinin.
Si kastaba ha ahaatee, waxaa cad in Gen. Abshir oo ka mid ah Carte ee uu kuwa kale ku adeegto si uu dadweynaha u tuso in odayaasha Pl ay Carte taageersan yihiin. Waxaa kaloo jira in xataa sidii loo qoray Qeylo Dhaan ay dhaxdoodii ay isku qabsadeen sida oday ka mid ah odayaasha uu ii sheegay.
Waxaase hubaal ah in reer PL ayan waligood la safan doonin kuwa Kismayo heysta oo uu wakhtigoodii dhammaadka yahay.